Iyadoo maalintii shalay oo Jimco ahayd, si isku mid ah looga wada oogay maalinta 1aad ee Ciidul Fitiriga, ayaa Muslimiinta ku nool UK, gaara ahaan Magaalada Birmingham, waxay u dhigeen Muslimiinta Yurub rikoor cusub.
Rikoorkaan ayaa wuxuu yahay inay sameeyeen isku soo bixiyaan ugu waynaa abid, kaasoo loogu dabaaldegayo Ciida, waxaana lagu sheegay tiradooda in ka badan 140,000 oo qof.
Dadkaan ayaa waxay isugu soo baxeen beerta Small Heath Park, oo ku taalla magaaladda Birmingham, waxayna tahay sanadkii todobaad oo xiriir ah oo sidaan oo kale loogu oogo beertaan Salaada Ciida.
Dabbaaldegga weyn waxaa qabanqaabiyay Masjidka Green Lane iyo Xarunta Bulshada (GLMCC) ee magaalada, kuwaasoo Salaada kadib dadka u qeybiya cuntooyin fudud iyo hadiyado kale.
Afhayeen u hadlay Guddiga qaban-qaabadda wuxuu sheegay in qeybgalayaasha ay ka kala yimaadaan dalal kala duwan, ayna isugu jiraan dad haysta manaahiijta kala duwan ee diinta suuban ee Islaam-ka.
Maalmaha Ciida waa ay uga duwan tahay maalmaha kale, shucuubta muslimiinta, iyagoo la isa siiyo Hadiyada iyo waliba waxyaabo kale oo qaali ah, islamarkaana ay isku booqdaan xaafadaha maalmaha ciida lagu guda jiro.
Midowga Yurub oo caddeeyay mowqifkiisa safarka Deni ee Muqdisho
Puntland 22.03.2020. 13:00
Xukun laga soo saarey dhul ay isku haystaan Muslimiinta iyo Hinduuska
Caalamka 09.11.2019. 09:17
Muuse Biixi oo hor-dhigay wafdiga EU-da mowqifkiisa wadahadalka DF
Somaliland 02.04.2019. 19:25
Midowga Yurub oo si kulul u eedeeyay DFS iyo maamullada
Soomaliya 06.07.2018. 13:46
Axmed Saciid Fiqi oo kasoo muuqdey liiska baarlamaanka Koonfur Galbeed
Soomaliya 19.03.2020. 16:35
Waqti cusub oo loo qabtay xiligga ay UK ka baxeyso Midowga Yurub
Caalamka 28.10.2019. 15:00